ISTICMAALKA HERBICIDES EE HADHUUDHKA SII KORDHAYA (XULASHADA IYO CODSIGA) - HERBICIDES
Ugu Weyn Ee Herbicides
Sida loo daweeyo hadhuudhka leh geedislaha
Corn waa mid caan ah oo la raadsado ka dib markii beeralayda guriga. Arrin muhiim ah oo ku jirta beeraheeda ayaa ka ilaalinaysa khashinka dalagyada. Jawaabta tan waxaa loo qaadan karaa isticmaalka herbicides.
Qodobbada Koritaanka Xoolaha
Korniinka koritaanka saxda ah wuxuu u baahan yahay xaaladaha soo socda:
heerkulka 12-25 ° C;
qoyaanka hawada aan ka yarayn 30%;
ciidda pH 5.5-7.0;
maalinta iftiinka ah kama gaaban 12 saacadood.
Wixii bacarimis iyo Bacriminta waxay isticmaalaan alaabooyin ay ku jiraan nitrogen, fosfooraska, potassium. Hawlgalku wuxuu bilaabmaa ka dib marka la beerto oo uu sii socdo ilaa inta la samaynayo miraha. Bacriminta Potash waxaa loo isticmaali karaa inta lagu jiro xilliga sii kordhaya.
Wixii quudinta, isticmaal noocyada kala duwan ee raaxada potash: Chloride potassium, potassium sulfate, cusbo potassium, nitrateum potassium, potassium magnesia, ash alwaax.
Waraabinta waa dhif. Laakiin biyuhu waa inay galaan qoto dheer oo ah 15 cm dareenka gaarka ah ee qoyaanka ciidda inta lagu jiro muddada guntinta iyo daaqsashada.
Ujeedada daawada herbicides ee dhaqanka
Shaqada weyn ee burburinta cawska waxaa la fuliyaa ka hor inta beereedka lagu daadiyo iyo ka hor inta aan la gaarin soo bixitaanka caleemaha - by harrow. Marka dhirta horay u baxeen koritaanka sida ugu habboon waa herbicides - diyaar u ah walxaha waxyeellada leh ee flora. Daaweynta Herbicide ee beeraha ma ogolaanayo haramaha si ay u burburiyaan caleemaha ugu horeysay ee hadhuudh.
Ma taqaanaa? Corn wuxuu ku fiican yahay dhammaan dalagyada, marka laga reebo yaanyada.
Waxaa jira laba nooc oo daawooyinka noocan ah:
Ficilka guud - gabi ahaanba nadiifi aagga dhirta. Waxaa loo adeegsadaa habka hore ee dhulka.
Tallaabo xulasho - dhirta dhirta nooc ka mid ah oo keliya.
Waxay ku saleysan tahay noocyada ugu dambeeya ee macnaheedu yahay noocyo kala duwan ayaa loo abuuray si loo nadiifiyo meelaha lagu beeray hadhuudhka.
Waa muhiim! Dhir daaweedyada oo dhan waa diyaar u ah sunta. Waa in si taxadar leh loo adeegsadaa iyo qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed. Waa in loo adeegsadaa si waafaqsan tilmaamaha.
Burburinta cawska ee marxaladaha dambe ee korniinka by farsamada macnaheedu waxaa loola jeeda khatarta ah ee waxyeelo nidaamka xididka.
Ma taqaanaa? Si loo helo beerasho guul leh, waa in la xusuusnaado in hadhuudhku aanu awoodin in uu la tartamo cawska dalagyada marxaladaha hore ee horumarinta. Sidaa darteed, isticmaalka herbicides ee galley, gaar ahaan hordhaca dhulka (horay u soo baxday) maaliyadeed waa muhiim weyn.
Daawooyinka ugu fiican
Sidaa darteed, waxaan go'aansanay baahida loo qabo in lagu dabaqo herbicides. Hadda waxaan fahmi doonaa noocyada ay u fiican tahay isticmaalka.
Ka hor intaadan bilaabin
Daroogooyinka ugu wax ku oolka badan uguna awood badan:
"Kratos" - cawska ciidda ee hadhuudhka, oo loogu talagalay burburinta haramaha. Waxay ka kooban tahay emetochlor emulsion. Maadada firfircooni waxay ka soo baxdaa caleemaha qashinka. Waxay joojisaa kobcinta borotiinka. Wuxuu billaabaa in uu isla markiiba sameeyo ka dib markuu sameeyo iyo ilaa dhammaadka xilli sii kordhaya. Daaweynaya sunta dhexdhexaadka ah (Halka fasalka);
"Harnes" - La xiriir talaabo xulasho ah, ilaalinta kahor-soo-baxa. Waa ku habboon tahay in lagula dagaallamo dhammaan noocyada haramaha. Walxaha firfircooni waa acetochlor, qaab ahaan emulsion 900 g / l;
"Acenit A" - Iyadoo ay ugu wacan tahay maaddada lidka diiqada, waxay muujinaysaa natiijo wanaagsan oo ka soo horjeeda noocyada kala duwan ee haramaha;
"Chaser P" - diyaarinta ciidda ka soo horjeeda haramaha dicotyled. Waxaa lagu taliyey in la isticmaalo ka hor biqilka iyo muuqaalka ka dib markii 2-3 go'yaal.
Ka dib soo bax
Qeybaha ugu ballaaran ee daawooyinka ayaa si gaar ah u tilmaamaya noocyada soo-baxa kadib:
"Dialen Super" - geed-ka-soo-bax-soo-saarka ah ee hadhuudhka, oo loo isticmaalo wajiga 3-5 ah. Tilmaamaha ka soo horjeeda dhirta dicotyledon sanadeedka iyo sanadka, oo ay ku jiraan kuwa iska caabiya xagasha kale;
"Titus" - waxaa loola jeedaa xakamaynta badarka iyo sanadka oo dhan, iyo sidoo kale haramaha laba-dheer. Waxaa loo isticmaali karaa xilliga koritaanka dheer - laga bilaabo 1 illaa 7 caleemo;
"Meister Power" - Xakameyn wax ku ool ah dhammaan noocyada haramaha, iyadoo aan loo eegin cimilada iyo carrada. Wax ku ool ah mowjadda labaad ee haramaha. Waxay u dhigantaa heerka labaad ee halista (suntan).
"Esteron" - loo isticmaalo wajiga 3-5 caleemo dhaqameed. Ujeedada la dagaallanka dicotyledons.
Sida loo isticmaalo herbicides for hadhuudhka
Xukunka ugu muhiimsan ee codsigani waa habka adag ee saxda ah ee tilmaamaha, ilaalinta diiradda. Xaaladdan oo kale, khatarta u keeni karta caafimaadka iyo deegaanka ayaa ah mid aad u yar. Doorashada daroogada ayaa sidoo kale saameyn ku leh nooca haramaha oo saameeya dalagyada. Haddii buufinta loo doortay hab lagu daaweynayo hadhuudhka, waa in dufka la kordhiyaa - si loo yareeyo saamaynta roobka iyo dabaysha.
Ma taqaanaa? Natiijada dabaysha iyo dhacdooyinka kale ee atmospheric, qiyaastii 30% daroogada firfircoon waxay ku jirtaa dhirta.
Haddii qalabka loo qorsheeyay in si toos ah loogu dabaqo carrada, xalka ayaa lagu qasan yahay lakabka sare ee carrada.
Marka buufin, waa inaad si taxadar leh u tixgelisaa xaaladda xayawaanka. Qalitaanka qalabka waxay ku xadgudbtaa midaynta daaweynta iyo saameynta daroogada.
Qaar ka mid ah maaddooyinka firfircooni waxay u nugul yihiin qoyaanka ciidda. Sidaa daraadeed, xakamaynta roobka waxay noqotaa qayb muhiim ah oo ka mid ah diyaargarowga beeraha. Wax-qabadyada hadhuudhka ah ee geed-geedka ayaa lagu sameeyaa heerkul aan ka badneyn 25 ° C. Marka heerkulku sarreeyo, dhirta naftoodu waxay noqotaa waxyeello, iyo caafimaadka shaqaalaha ayaa halis gelin kara. U hoggaansamida shuruucda badbaadinta shaqada waa mid aad muhiim u ah markaad samayso mukhaadaraadka. Shaqada waa in lagu sameeyaa oo keliya dhar khaas ah, iyadoo la isticmaalayo ilaalinta neefsashada iyo gacmo gashi. Ka taxadar markaad samayso mukhaadaraad. Xusuuso in ay ku qaadi karaan dabaysha waxaana jira khatar sare oo sun ah oo soo galaya meelaha kale.
Waa muhiim! Hirgelinta herbiska ayaa si adag loo mamnuucay dhismaha cobs. Waqtiga kama dambaysta ah ee daaweynta ugu dambeysa waa hal bil ka hor goosashada.
Daawooyinkaasi waa waxyaabaha ugu muhiimsan ilaalinta dhirta. Daawooyin badan oo kala duwan ayaa kuu oggolaanaya inaad doorato qalabka ugu fiican ee aad u shaqeyso. Toxicity hoos, waxtarka sare, noocyo kala duwan - Dhammaan tani waxay u oggolaaneysaa isticmaalka firfircoon ee herbicides ee ilaalinta dhirta tayo sare leh.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Herbicides 2019